China Isixhobo soKhuseleko loKhuseleko lwentwasahlobo yenkomo yeLobster ekhawulezileyo yokuLungisa okuLahlekileyo kunye neFektri | Spocket
Eminye imitya yeLanyard
Tsala iibhokisi ezibi
Iibheji zeBheji eziRhoxisiweyo
Iimpawu zeMetro kunye neeGama
Izixhobo zeRope Hardware
Indawo yokuma kwePOS
I-1M yokwandisa ubude boSasazo lokuLoba ukuLoba ukuThengisa ...
Ukhuseleko Olubotshiweyo Lanyard Rop Strip ...
Multi Function eziBhijeleyo Isixhobo yenkomo Anti Ubusela Elasti ...
Isixhobo somoya esijikelezayo
Isiseko esiphakamileyo seSibini esenziwe ngeSinyithi seCarabiner Hook ...
Plastic Bungee ezibhijeleyo Isixhobo yenkomo Ukwenza Imisebenzi A ...
Isixhobo sokuLoba ngobuGcisa seFlexible Coil yeLanyard Leash Steel ...
Isixhobo sentsimbi yoKhuseleko lwentwasahlobo yenkomo ekhawulezayo yokuKhupha ...
Ihowuliseyili eyinyani Core yoshicilelo yenkomo Stop Dro ...
Ulwenziwo lokuthile ngaphaya Heavy Duty Plastic Spring Hi ...
Deluxe Spring ezibhijeleyo yenkomo Cord Kuba Attach Dive ...
Isixhobo seSinyithi soKhuseleko lwentwasahlobo yenkomo ekhawulezayo yokuKhupha iiLobster eziLahlekileyo
Inombolo yomzekelo: CTL-104
Ubuncinci be-Order Order: Ukuxoxwa
Iinkcukacha Packaging: Bulk / Bundle / PE Bag, Rhweba ngaphandle Carton
Ixesha lokuzisa: iintsuku eziyi-8-10 zokusebenza
Imibala emi-5 eshushu Anti-elahlekileyo yesixhobo soKhuseleko kwiNtwasahlobo yeLanyard ekhawulezayo yokuKhupha iiLobster Umboniso
Isixhobo sokhuseleko senkqubela yenkomo sisiqwenga esibalulekileyo sesixhobo sokhuseleko. Iqinisekisa ukuba uhlala uncanyathiselwe kubugcisa bakho, iklip yokukhutshwa ngokukhawuleza ivumela unxibelelwano olulula, khusela izixhobo zakho zokuwa, ukuwa, ukulahleka, njl. Wamkelekile usibuze!
Isixhobo somntu: Spocket
Umgangatho ozibhijeleyo: 160mm
Umgangatho ongafakwanga: 2m
Ukuphela: iklipster yekliphu 2pcs
Umsebenzi: ziyeke izixhobo eziwayo
Umbala: mnyama ngaphaya, bomvu, luhlaza, luhlaza, tyheli
Izinto eziluncedo: inkumbulo ebalaseleyo, ubhetyebhetye obuphezulu, ukubuyela kwimeko yesiqhelo ngokukhawuleza
I-OEM: iintlobo ezahlukeneyo zezitayile, ubukhulu, imibala ziyafumaneka
MOQ: 200pcs ngombala ngamnye
Isampulu Stock ngaphakathi 1-3days, intlawulo isampuli simahla
Isampuli entsha ngaphakathi kweentsuku ezi-5 ukuya kwezi-5, ubambe isampulu
Ukuchaza ukuhanjiswa kwesampulu kukwixabiso lomthengi
izinto zentambo, ubungakanani, umbala, isincedisi, ukupakisha
Phendula ngaphakathi kweeyure ezingama-24
Inkonzo ye-OEM / i-ODM
Ulawulo lomgangatho ophezulu
1. Yintoni MOQ yakho?
Ngokwesiqhelo MOQ yethu yi-1,000pcs. Kodwa samkela ubungakanani obuncinci kwi-odolo yakho yesilingo. Nceda uzive ukhululekile ukuba usixelele ukuba yintoni ubungakanani obuyifunayo, siya kubala eyona ndleko iphambili, ngethemba lokuba uya kubeka iiodolo ezinkulu emva kokujonga umgangatho kunye nenkonzo yethu kwisivumelwano sokuqala.
2. ixesha elide kangakanani isampula phambili?
Kwiisampulu zesitokhwe, kuthatha iintsuku ezi-2 ukuya kwezi-4. Ezinye zazo zisimahla. Ukuba ufuna uyilo lwakho, kuyakuthatha malunga neentsuku ezi-5 ukuya kwezi-7, ngokwemveliso eyahlukileyo oyifunayo. Nokuba yintoni na, siya kwenza konke okusemandleni ukuyigqiba kwangoko.
3. ixesha elingakanani imveliso phambili?
Ngokwesiqhelo kuya kuthatha i-10-15days, exhomekeke kubungakanani nakwinto esiyiqinisekisileyo.
4.Yintoni indlela yakho yokupakisha?
Sisebenzisa ukupakisha okuthunyelwa kwelinye ilizwe, ngengxowa / ibhokisi kunye nesuti yebhokisi yemveliso eyahlukileyo, okanye ukwenza ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso njengesicelo sakho.
5. Lithini ixesha lakho lokurhweba?
Ngokwesiqhelo sicebisa iCFR / CIF okanye i-CPT ngenkonzo yethu yokuhambisa phambili, iFOB / i-EXW nayo ilungile, konke njengesicelo sakho.
6. Liliphi ixesha lakho lokuhlawula?
Ixesha lethu lokuhlawula eliqhelekileyo ngu-T / T kwiakhawunti yethu yenkampani, isixa esincinci siya kwamkela yi-Paypal okanye i-Western Union.
7. Yiyiphi indlela yakho yokuthumela?
Ngokwesiqhelo iibhokisi ezininzi ngokuhanjiswa okukhawulezileyo, sihlala sisebenzisa ukuhanjiswa okucacileyo, njenge-DHL, i-FedEx, i-UPS, i-TNT, ukuba i-cargos ezininzi njenge-GW ngaphezulu kwe-100kg, i-LCL ngolwandle okanye ngomoya, ngololiwe zonke ziyafumaneka, konke ngokweemfuno zakho.
Egqithileyo Ukwandiswa kwenayiloni Core yoPhepha oluPhezulu oluPhezulu lweLanyard Stop Stop Tooling ngokuSebenza kubude
Okulandelayo: Isixhobo soLoba ngobuGcisa esiSebenzayo seCoil seLanyard Leash yensimbi eQinisekisiweyo yoMthwalo 50KG
Cable Isixhobo seLanyard
Isixhobo esiXubileyo seLanyard
Ukolulwa okubonakalayo okungumthwalo onzima wePlastiki Spri ...
Isiseko esiphakamileyo seSibini seCarabiner engenanto.
Plastic Bungee ezibhijeleyo Isixhobo yenkomo Ukwenza J ...
Deluxe Spring ezibhijeleyo yenkomo Cord ngokuba kuqhotyoshelwe ...
Zokwandiswa Inayiloni Core Purple Safety yenkomo Sto ...
Idilesi:I-322, i-A2 Complex Building, i-Guangqian Vil, i-Nanshan Dist, i-Shenzhen, i-Guangdong, i-518055, i-China